Meksika: Fanitsakitsahana Ny Zon’olombelona Sy Ny Fifidianana Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2012 9:20 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, македонски, Français, Español, English
Mitantara ny toe-draharaha ao San Salvador Atenco sy Oaxaca, toerana roa ao Meksika izay nijaly noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny antoko politikan'ny fitondrana ny lahatsary fanadihadiana A Schizophrenic State notontosain'i Charlotte King, tafiditra amin'zany ny Governora izay manam-pikasana hirotsaka hofidiana filoham-pirenena.
Mampiseho ny tsy fisian'ny fanajana ny zon'olombelona ataon'ny governemanta Meksikana ny hetsi-panoherana ara-tsosialy, izay niteraka herisetra niafara tamin'ny famoizana ain'olona, fanagadrana, ary ny filazana ny fisian'ny fampijaliana miendrika fanararaotana ara-nofo, hetsi-panoherana ho amin'ny zo momba ny fananan-tany sy ny tolona ho amin'ny fampianarana. Nahatonga ny Amnesty International hanasokajy ny governemanta Meksikana ho toy ny tsy mahatsiaro tena izany toe-javatra izany, hatramin'izay naha tompondaka iraisam-pirenena an'i Meksikana teo amin'ny fanajana ny Zon'olombelona, izay, kanefa mamela malalaka ny fanitsakitsahana ny zo eo amin'ny taniny.
Azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Amnesty International ny tatitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Atenco sy Oaxaca. Tao Atenco:
Olona 211 farafahakeliny no nosamborina tamin'ny 3 sy 4 Mey 2006 tao an-tanàn-dehiben'i Texcoco sy San Salvador Atenco, Firenen'i Meksika, taorian'ny hetsika nataon'ny polisy ho famaizana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpikatroka avy amina fikambanana tambanivohitra ao an-toerana. Anisan'ireo nosamborina ireo vehivavy miisa 47. Mamariparitra ny zava-nahazo ireo vehivavy ity tatitra ity, nasongadina manokana ny tatitra momba ny fanararaotana ara-nofo sy ny tsy fisian'ny famotorana mahomby sy tsy miangatra mba hahafahana mitondra ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fitsarana ny tompon'andraikitra.
Nitaky ny fametram-pialàn'ny Governoram-panjakana avy any amin'ny firenena Oaxaca ny hetsi-panoherana tamin'ny volana Jiona 2006. Nandritra ny volana maromaro, nikatso tanteraka ny toe-draharaha tao an-tanan-dehibe Oaxaca. Mifantoka amin'ny fanitsakitsahana lehibe sasany atao amin'ny zon'olombelona nandritra ny krizy ity tatitra ity, toy ny fampiasan-kery tafahoatra (anisan'izany ny hery mahery vaika mahafaty), ny fanagadrana tsy amin'ny antony sy mangingina, fikarakarana ratsy sy ny fampijaliana, fandrahonana, fandrahonana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanao gazety, ary ny tsy fanajana ny fitsipika tokony arahina momba ny fitsarana sy ny zo hahazo fitsarana marina. Ny polisy monisipaly, fanjakana sy ny polisy federaly no tena nanao ny ankamaroan'ireo fanararaotana ireo.
Satria efa akaiky ny fifidianana filoham-pirenena taona 2012, ilaina ny mahita mazava mikasika izany fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay ka hoentina eny anivon'ny fitsarana izay tompon'andraikitra.’
Meksika 15 ora izay
Famonjàna ankizy : nahoana ireo olon-dehibe Salvadoriana no tsy miraharaha an'ireo tanora voarohirohy anaty asan-jiolahy
El Salvador 1 herinandro izay